Dalalka uu saamaynayo xayiraadda Maraykanka oo cambaareeyay - BBC News Somali
Dalalka uu saamaynayo xayiraadda Maraykanka oo cambaareeyay
Dalalka lagu bartilmaameedsaday xayiraadaha cusub ee dallka Maraykanka ee uu ansixiyay madaxweyne Donald Trump ayaa weeraray go'aankaas, waxaana arrintaas ku weheliya Qaramada Midoobay.
Isniintii ayuu madaxweyne Trump sixiixay amar horleh oo 90 maalmood dalka Maraykanka ka mamnuucaya dadka ka soo jeeda lix dal oo Muslimiin ah.
Amarkan ayaa loo soo bandhigay in looga golleeyahay in lagu xoojiyo ammaanka qaranka iyada oo lagaga hortagayo halista ka imanaysa argagixisada.
Sikastaba ha ahaatee Suudaan iyo Soomaaliya ayaa sheegay in aan go'aankan qiil loo haynin.
Go'aankan oo 120 maalmood mamnuucaya dhammaan qaxootiga ayaa dhaqan galaya 16 Maarso.
Arrintani waxay dabo socotaa amarkii kan ka horeeyay ee ay hor istaagtay maxkamada faderaalka ee dalka Maraykanka, kaas oo jahwareer ka dhaliyay garoomada horseedayna in ay dhacaan mudaaharaadyo lagu diidan yahay.
Amarkan muxuu ka dhigan yahay
Muwaadiniinta ka soo joode Soomaaliya, Suudaaan, Yemen, Liibiya, Suuriya iyo Iiraan ayaa laga mamnuucay in ay muddo 90 casho ah galaan dalka Maraykanka, lixdan dal ayuu sidoo kale saamaynayay go'aankii Trump ee 27 Janaayo.
Dalka Ciraaq ayaa hadda laga reebay dawladda ayaana kordhisay baaritaanada ay dadkeeda ku samayso iyo macluumaadka ay Maraykanka la wadaagto, sida uu sheegay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka.
Qaxootiga ay ansixisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanku hadda way gali karaan Maraykanka, waxaa sidoo kale la qaaday xayiraadii guud ee la saaray qaxootiga Suuriya.
Dadka haysta sharciga Green Card-ka loo yaqaano (daganaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka) ee ka soo jeeda dalalkaas la xusay ma saamayn doono go'aankani.
Mudnaan gaar ahna lama siin doono dadka haysta diimaha laga tirada badan yahay sidii kii hore uu dhigayay.
Wasiirka aminiga gudaha ee dalka Maraykanka John Kelly ayaa sheegay in dalkiisu uusan ka badqabin halista argagixisada cadawgooduna ay badanaa adeegsadaan xoriyadda iyo samofalka ay iyagu bixiyaan.
Image caption Mudaaharaadyo kuwii hore aad uga yar ayaa ka dhacay garoomada dalka Maraykanka
Xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions ayaa sheegay in ay jiraan 300 oo ruux oo qaxooti ah oo baaritaan lagu hayo kuwaas oo ay suuragal tahay in ay falal argagixiso gaystaan, laakiin faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin.
Wuxuu sheegay in saddex ka mid ah dalalka la mamnuucay in ay taageeraan argagixisada sadedexda kalena ay gacantooda ka baxday maamulidda dhulkooda iyagoo ay gacanta ku hayaan Malayshiyaadka sida kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ama Al-Qaacida.
Jawaaabaha laga bixiyay
Dalkaste oo xayiraadan cusub la saaray jawaab kama uusan bixinin, Iiraan ayaa amarkii hore ku tilmaantay mid aan "sharci ahayn" caqligana gali karin, kana soo horjeeda qawaaniinta caalamiga ah.
Xaakim is hortaagay amarkii Trump uu ku soo rogay 7 dal oo Muslim ah
Kaaliyihii dhanka ammaanka ee Trump oo is casilay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhalashada Maraykanka haysta ayaase Talaadadii walaac ka muujiyay xayiraaadan cusub.
Wuxuu sheegay in Soomaali lagu qiyaasay 150,000 oo ruux oo Maraykanka ku nool in ay wax ku kordhiyeen bulshada iyo dhaqaalaha Maraykanka.
Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa iyadana sheegtay in ay aad uga xuntahay xayiraadan cusub ee la soo saaray.
Warqoraal ah oo wasaaradda ka soo baxay ayaana intaas ku daray in muwaadiniin Suudaan u dhashay aysan waligood ku lugyeelanin dambiyo ama falal argagixiso oo ka dhacay gudaha Maraykanka.
Shah Rukh khan oo Maraykanka lagu "xiray"